Dawlada Ingiriiska Oo ka hadashay Mustaqbalka wada hadalada Somaliland & Soomaaliya | Salaan Media
Dawlada Ingiriiska Oo ka hadashay Mustaqbalka wada hadalada Somaliland & Soomaaliya
Washington (SM)- Dawladda Ingiriiska ayaa sheegtay in wada hadalada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ay yihiin qaar ku xidhan oo ay go’aankooda leeyihiin labada geesood.
Mark Simmonds, Xoghayaha Arrimaha Afrika u qaabilsan dawlada Britain, oo shalay kaga hadlayey xarunta Strategic studies and International Studies ee Maraykanka ujeedooyinka shirka ay bisha May ee fooda inagu soo haysa ay ugu qabanayaan Soomaalida magaalada London ayaa sheegay in mowqifka UK ee Somaliland cad yahay, isla markaana fahamsan yihiin hadafka Somaliland u socoto, mar wax laga weydiiyey Somaliland.
Mr, Simmonds, oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey kulankii shalay oo ku saabsanaa Somaliland ayaa yidhi, “Mowqifka Ingiriiska ee Somaliland wuu cad yahay. Waan fahamsan nahay hadafka Somaliland u socoto. Laakiin, sidaan qabno, wada xaajoodka Somaliland iyo Soomaliya u dhexeeya waa arrin muhiim ah, ma filayo inuu sahlanaan doono, balse, aakhirka labada dhinac ayaa looga baahan yahay inay wada gaadhaan xal ay ku qancaan. Waxaana muhiim ah inay wada xaajoodyadooda ka bilaabaan dhinacyada ay iska kaashan karaan.”
Xukuumada Ingiriiska ayaan ka hadal mowqifka xukuumada Somaliland ku qaadacday ka qeybgalka shirka London, oo marar badan masuuliyiinta dawladda Ingiriiska, ilaa raysal-wasaarahooda David Cameron, isku deyey inuu ku qanciyo Madaxweyne Siilanyo, xilligana u muuqda kuwo ka rajo go’ay inay Somaliland keenaan miiska shirka London.